Caleemaha jaadka jirka dadka maxay ku sameeyaan
» Caleemaha jaadka jirka dadka maxay ku sameeyaan
Waxaa jira daraaso badan laga sameeyo qaadka ama jaadka waxyaalaha jirka uu ku sameeyo, kitbaabka Althabaat fii xadri alqaat الثبات في حظر القات waxaa qoray qof soomaali ah oo baaritaan rasmi ku sameeyay qaadka buuggan wuxuu ku qoran yahay afka carabiga waxaad ka heli kartaa isagoo pdf ah internetka waxaa qoray Abuu Abdirahmaan Assomali. wuxuu ku soo arooriyay waxyaalo badan uu qaadka ku sameeyo qofka waxaad ka heli kartaa akhriska caadiga ah halkan waxaa
ka mid ah dhibka uu leeyahay dhiigdaro wuxuu kaa xiraa cuntada mindhicirada ayuu dhib weyn u gaysanayaa, wuxuu dadka ka mashquuliyaa salaadda, wuxuu burburiyaa ilkaha iyo gowsaha, qaadka qaarkii wuxuu ragga ku ridaa cuduro badan oo kala duwan, waxaa kuu sii dheer inuu maskaxda kaa qaado oo bulshada uu fasaahdiyo, immisa naag loo soo furay qaadka dad badan ayaa laga yaabaa marduufka inuu ka doorto marwadiisa, marduuf oo maanka kaa tagsiinaya miyaad ka dooranaysaa marwo oo raaxada nolosha ah.
kaloo la sheegaa ninka inuu kacsiga ka qaadi doono, biyahiisa inay iska
soo daadan iyagoo aan adkayn isagoo biyabax xitaa gaarin.
wax isma dhaamaan waa sida xaarka iyo kaadida, aad bay u burburiyaan hanti qofka iyo caafimaadkiisa, haddii aad rabto inaad ku noolaato nolol
fiican oo raaxo leh waxaad ka fogaataa bwladda oo dhan, waayo haddii jaad iyo sigaar aad barato waxaad raadinaysaa khamro iyo daroogo, waxaa laga yaabaa inaad tuug noqoto sidii aad u heli lahayn, waxaa la sheegaa tuugada badankooda inay balwad leeyihin.
iska caddahay ragga ayaa u badan balwada laakin way jiraan dumar badan oo adeegsada balwadda waxaa la sheegaa naagaha waxay ka bartaan balwada saaxiibkooda, ninka ayaa inta badan bara, ileen haweenka dabeecddooda ma
aha inay waxyaalahaas oo kale ku dhaqaaqaan, naag balwad leh waxay noqon kartaa dhilo, dhilooyinka badankooda balwada ayay leeyihiin, waxaad dhihi kartaa ma jirto sharmuuto aan balwada lahayn, dumarka soomaali aad bay ugu yar yihiin kuwa balwadda leh.
jawaabta waa haa wuxuu rabaa keliya go'aan adag haddii aad la timaado go'aan adag waad kahari kartaa qaadka iyo sigaarka.
naago soomaali badan oo sheegaya raga qaadka cuna inaysan sariirta ku fiicnayan video daawo, galmo fiican ma samayn karo naag ma qancin karo Talo haddii aad u baahan tahay booqo maamulka talooyin